Rota 1 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
1 Tamin’ny andro nitondran’ny mpitsara,+ dia nisy mosary+ teo amin’ilay tany. Koa niala tany Betlehema+ any Joda ny lehilahy iray mba honina tany ambanivohitr’i Moaba,+ niaraka tamin’ny vadiny sy ny zanany roa lahy. 2 Elimeleka no anaran-dralehilahy, Naomy no anaran’ny vadiny, ary Malona sy Kiliona no anaran’ny zanany roa lahy. Efratita+ avy any Betlehema any Joda ry zareo, ary tonga tany ambanivohitr’i Moaba, ka nitoetra tany. 3 Rehefa afaka elaela, dia maty i Elimeleka vadin’i Naomy. Koa ravehivavy sy ny zanany roa lahy sisa no tavela. 4 Tatỳ aoriana izy roa lahy dia nanambady vehivavy moabita.+ Orpa no anaran’ny iray, ary Rota+ no anaran’ny iray. Ary mbola nonina tany folo taona teo ho eo ry zareo. 5 Maty koa anefa izy roa lahy, dia i Malona sy Kiliona, rehefa afaka elaela. Koa i Naomy sisa no tavela, fa tsy teo intsony na ny vadiny na ny zanany roa lahy. 6 Ary niainga avy tany ambanivohitr’i Moaba izy sy ireo vinantovaviny, mba handeha hody. Henony tany mantsy fa nitsinjo ny olony+ sy nanome azy hanina+ i Jehovah. 7 Dia niala tao amin’ilay toerana nisy azy izy,+ niaraka taminy ny vinantony roa vavy. Koa rehefa teny an-dalana hody tany amin’ny tanin’i Joda ry zareo, 8 dia hoy i Naomy tamin’izy roa vavy: “Samia mody any an-tranon’ny reninareo avy ianareo. Ary i Jehovah anie haneho hatsaram-panahy feno fitiavana aminareo,+ toy ny nasehonareo tamin’ireo maty sy tamiko!+ 9 I Jehovah anie hanao fanomezana+ ho anareo, ka samy hahita fiadanana+ any amin’ny tranon’izay ho vadinareo avy ianareo!” Dia nanoroka+ azy roa vavy izy. Koa nitomany mafy izy ireo, 10 sady namerimberina hoe: “Tsia, fa hiara-mody aminao any amin’ny firenenao izahay.”+ 11 Fa hoy i Naomy: “Miverena, anaka! Nahoana ianareo no hiaraka amiko? Mbola misy zanakalahy mety ho lasa vadinareo angaha ato an-kiboko?+ 12 Miverena, anaka! Mandehana fa efa antitra loatra aho ka tsy hahazo vady intsony. Ary na hilaza aza aho hoe mbola manantena ny hisy haka vady anio alina, ka hitera-dahy tokoa,+ 13 dia hahandry azy mandra-pahalehibeny ve ianareo? Hanokan-tena tsy hanambady ve ianareo hiandrasana azy ireo? Tsia, anaka, fa mangidy amiko ny namelezan’i Jehovah ahy,+ rehefa mieritreritra ny manjo anareo aho.” 14 Koa vao mainka nitomany mafy izy roa. Dia nanoroka ny rafozambaviny i Orpa avy eo, fa i Rota kosa nifikitra taminy.+ 15 Koa hoy i Naomy: “Jereo fa lasa nody any amin’ny fireneny sy ny andriamaniny+ ny rahavavinao maty vady. Modia miaraka aminy koa.”+ 16 Fa hoy i Rota: “Aza manery ahy handao anao sy hisaraka aminao, fa izay alehanao no halehako, ary izay atorianao no hatoriako.+ Ny firenenao no ho fireneko,+ ary ny Andriamanitrao no ho Andriamanitro.+ 17 Izay toerana ahafatesanao no hahafatesako,+ ary any no hilevenako. Hofaizin’i Jehovah anie aho,* ary mihoatra noho izany aza,+ raha tsy ny fahafatesana ihany no hampisaraka ahy aminao!” 18 Rehefa hitany anefa fa nisisika hiaraka taminy+ ihany i Rota, dia tsy niteny intsony izy. 19 Dia nanohy ny diany mandra-pahatonga tany Betlehema+ izy mianaka. Ary nisomaritaka ny iray tanàna+ raha vao nahita azy ireo tonga tany, ka hoy ireo vehivavy tao an-tanàna: “I Naomy ve io?”+ 20 Dia hoy izy tamin’ireo: “Aza miantso ahy hoe Naomy, fa antsoy hoe Mara aho satria tena nampangidy ny fiainako ilay Mahery Indrindra.+ 21 Nanam-be aho fony niala teto,+ nefa nampody ahy tanam-polo i Jehovah.+ Nahoana ianareo no miantso ahy hoe Naomy nefa i Jehovah no efa nampietry ahy,+ ary ilay Mahery Indrindra no efa nahatonga loza tamiko?”+ 22 Toy izany no nodian’i Naomy. Ary niaraka taminy i Rota Moabita vinantovaviny, rehefa nody avy tany ambanivohitr’i Moaba+ izy. Ary tonga tany Betlehema+ izy mianaka tamin’ny fiandohan’ny fijinjana vary orza.+
^ A.b.t.: “Hataon’i Jehovah amiko anie izany!”